Amparafaravola Dahalo 1 maty, olona 5 naratra
Ankazoabo Atsimo Tsy voavaha ny olan’ny tsy fandriampahalemana
Tsy mandeha amin’izay izy ny fambolena any amin’ny distrikan’Ankazoabo Atsimo, faritra Atsimo Andrefana, nefa tantsaha no maro an’isa any.
Faritra Atsimo Andrefana Efa hain’ny dahalo tsianjery ny kizo handosirana
Izahay depiote no tokony hangataka zandary hiaro sy hampandry tany ny faritra misy anay satria izahay no mahafantatra ny zava-misy any, hoy ny depiote lany tao amin’ny distrikan’i Toliara II, Tsitara Rogers.
Zandarimariam-pirenena “Ny Zandary-Jiolahy no haiditra am-ponja”
“Hatramin’izay nitantanako dia zandary 42 no niditra am-ponja ka misy amin` izy ireo manamboninahitra ambony.
Tsaralalana Mpanakalo devizy nisy nitifitra
Nitrangana asa fanafihana tao Tsaralalana akaikin’ny sekoly ENMG omaly alarobia 10 jona atoandro tokony ho tamin’ny 12 ora sy sasany. Mpivady avy nanakalo vola vahiny (devise) tao amina banky iray teny an-toerana no nisy nanafika.
Andramasina Voaroba ny vola, voavely “bois rond” ny tompon-trano
Notafihin’ny jiolahy telo nitondra famaky sy “bois rond” ny tokantrano iray tao amin’ny fokontany Antsampanimahazo, distrikan’Andramasina, faritra Analamanga, ny sabotsy misasak’alina teo, tokony ho tamin’ny 12 ora sy 30 minitra.
Manomboka mahazo vahana ny amin’ny faritra Alaotra Mangoro ny asan-dahalo, indrindra fa ny ao amin’ny distrikan’Amparafaravola.
Anisan’ny niaina izany ny tao amin’ny kaominina Amboavory distrikan’Amparafaravola ny alin’ny talata teo. Dahalo 30 mahery no indray nanafika tao amin’io tanàna io ka omby 50 no lasan’izy ireo ary olona dimy hafa kosa no naratra mafy vokatry ny tifitra nataon’ireo dahalo. Nanara-dia ireo dahalo avy hatrany ireo fokonolona sy mpitandro ny filaminana tao an-toerana, ka omby 42 isa no tafaverina amin’ny tompony soa aman-tsara. Nisy ihany koa ny dahalo iray maty ny zandarimariam-pirenena nandritra ny fifanjevoana. Efa manaraka fitsaboana ao amin’ny hopitaliben’Ambatondrazaka moa ireo olona dimy naratra, ka anisany ity renim-pianakaviana hitantsika amin’ny sary ity izay voamafy eo amin’ny masony. Nisy ihany koa ireo voatifitra tany amin’ny fitombenany….